वार्षिकोत्सवको अवसर पारी बोर्डले फिल्मकर्मीलाई सम्मान गर्नेFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
वार्षिकोत्सवको अवसर पारी बोर्डले फिल्मकर्मीलाई सम्मान गर्ने
फिल्मी फण्डा । चलचित्र विकास बोर्डले १० जना फिल्मकर्मीलाई ‘चलचित्रकर्मी विशेष योगदान सम्मान – २०७६’ बाट सम्मानित गर्ने भएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले १९औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारी १० जना फिल्मकर्मीलाई सम्मान गर्न लागेका हुन् ।
वि.सं. २०५७ साल असार १६ गते स्थापना भएको चलचित्र विकास बोर्डले हरेक वर्ष १६ असारलाई आफ्नो स्थापना दिवस मनाउँदै आएको छ । पुराना ऐतिहासिक महत्वका फिल्महरुलाई डिजिटलाईजेशन र रेस्टोरेशन भएका फिल्महरुका केही दृश्यहरुलाई वार्षिक उत्सव पारी बोर्डमा प्रर्दशन गरिने चलचित्र विकास बोर्डले एक विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : फ्लपमा ह्याट्रिक नहोस् है
फिल्मी फण्डा । नायिका शिल्पा मास्के अभिनित दुई फिल्म,‘द ब्रेकअप’ र ‘कागजपत्र’ प्रदर्शनमा आइसकेका छन् । दुवै फिल्मले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेनन् । दुवै फिल्म फ्लप भए । शिल्पा रजतपटको बारेमा धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गर्छिन् । हलबाट टाढिएका दर्शकलाई कन्टेन्टमा फोकस हुँदै फिल्म निर्माण गर्न सकियो भने हलसम्म तान्न सकिने उपाय सुझाउँछिन् । कहिले ‘जे पायो त्यही फिल्म गरेर स्टार हुने मन छैन’ भन्छिन् ।
उनको ज्ञानले उनलाई लामो रेशको घोडा बनाउने देखिन्छ । उनको करियरको तेस्रो फिल्म ‘सानो मन’ असार २० गतेबाट प्रदर्शन हुँदै छ । रजतपटको तिता यथार्थको ज्ञान उनीमा छ । उनले भन्ने गर्छिन,– ‘हाम्रो कथा भन्ने तरिका एकनासको छ । पाँच वर्षअगाडि जसरी कथा भन्थ्यौँ, अहिले पनि त्यस्तै । फरक काम गर्न निर्माता पनि डराउँछन् । लगानी नउठ्ला भन्ने भय छ ।’ त्यसो त भय उनको करियरलाई पनि छ किनकी लगातार दुई फिल्म असफल भइसकेको समयमा तेस्रो फिल्म असफल भएको खण्डमा फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक हुनेछ । आशा गरौँ उनको फ्लप फिल्ममा ह्याट्रिक नहोस् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : फिल्ममा गीत चोरीको रुपरेखा
फिल्मी फण्डा । अहिले प्रकाश सपुतको ‘गलबन्दी…’ बोलको गीत निकै चर्चित छ । यो गीत नसुन्ने सायदै होलान् ! १५ दिनमै युट्युबमा एक करोड भ्युज बटुलेर यो गीतले नयाँ रेकर्ड राख्यो । तर यस गीतलाई चोरीको आरोप लागेको छ । उक्त ओरिजिनल गीत हो, ‘आऊ नाचौँ साथी हो…’ पुराना सर्जक शम्भु राईको गीतसँग मेल खाए पछि सपुत र राई संगीत क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग छलफलमा छन् ।
समय समयमा रजतपटका गीत संगीतहरु पनि चोरी हुने गरेका आरोप लाग्ने गर्छ । फिल्म छक्का–पञ्जा २ मा समावेश ‘नाइलनको सारी…’वोलको गीतलाई चोरीको आरोप लाग्यो । दिवंगत कान्छा मगर नेपालीको गीत चोरीको आरोप लाग्यो । जसलाई लिएर फिल्मका निर्माता दीपक राज गिरीले माफि समेत मागेका थिए ।
त्यस्तै फिल्म कृ मा समावेश गरिएको ‘उकालीमा अघिअघि…’ गीतलाई पनि चोरीको आरोप लागेको थियो । कृ का निर्माता समेत रहेका भुवन केसीले अभिनय गरेको करिब ३५ बर्ष पुरानो फिल्म सम्झनाको गीत समावेश गरेकै आरोपमा अर्का निर्माता सुवास गिरी थुनामा परे । उक्त गीतलाई सम्झना फिल्मका निर्माता/निर्देशक शम्भु प्रधानले कपीराइट हनन भएको भन्दै प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । उजुरी पश्चमत् प्रहरीले गिरीलाई हिरासतमा लियो । ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेपछि मात्र उनी हिरासतमुक्त भएका थिए ।
त्यस्तै फिल्म शत्रु गतेको ‘रुपै मोहनी’ बोलको गीतलाई कुमार बस्नेतले चोरीको आरोप लगाए । आफ्नो गीत ‘रक्सी खान जाउँ’ सँग ठ्याक्कै मिलेको बताएका थिए । यो गीतमा टंक बुढाथोकीले संगीत दिएका थिए । बुढाथोकीले गीत मिलेको स्वीकार गरेनन् भने ‘संगीतका १२ वटा नोटमा बसेर काम गर्दा यताउता ठोक्किनु स्वभाविक’ भन्दै पन्छिए । छक्का पन्जा ३ को लागि तयार पारिएको भनिएको उक्त गीत दिपक र दिपाले शत्रुगतेको टिमलाई दिएका थिए । फिल्मकै अर्को गीत ‘ओडाउँला पिरतीको बर्को तिमिलाई’ पनि चोरीको आरोप लाग्यो । कालिप्रसाद बास्कोटाले संगीतमा तयार पारिएको उक्त गीतलाई अर्का संगीतकार तथा गायक राज सागरले चोरीको आरोप लगाएका थिए ।
बास्कोटाले नै मञ्जरी फिल्मका लागि तयार गरेको ‘मन यो मेरो हजुर…’ हिन्दी फिल्म शोर इन द सिटीको ‘सैबौ…’ सँग मिल्न जान्छ । त्यस्तै उनले नै फिल्म डमरुको डन्डीबियोका लागि तयार गरेको ‘ तीतेपाती तीतेपाती…’ बोलको गीतलाई पनि चोरीको आरोप लागेको थियो । उक्त गीतलाई गायक प्रकाश पौडेलले आफ्नो यही शीर्षकको गीतबाट कपी गरेको आरोप लगाए उनका अनुसार ‘तीतेपाती तीतेपाती…’ गीत ०५७ मा रेकर्ड भएर अर्को वर्ष सार्वजनिक भएको थियो । कतिपय सर्जकहरु चोरी गर्ने व्यक्तिहरुको बजारमा हालिमुलालि रहेको र उनीहरु नै बलियो रहेको भन्दै चुप लागेर बस्ने गरेका छन् ।
संगीतकार वसन्त सापकोटा गीत चोरी हुनुमा सबैको दोष रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, –‘चलेको गीत/संगीतलाई लहैलहैमा पछ्याउने श्रोता, संगीतकर्मी र निर्माता कारण गीत फिल्मका गीतहरु चोरी भएको हुनसक्छ’ उनी थप्छन्– ‘एउटा गीत चलेपछि अर्को गीत कहिले भन्ने श्रोताको दवाव र अरुको गीत सुनाउँदै मलाई यस्तै खालको गीत चाहियो, परेको म बेहोर्छु भन्ने निर्माताको कारणले गीतहरु अन्य गीतबाट प्रभावित हुन सक्छ ।’ अरुको गीतमा ताल यस्तो छ यसको कर्ड यस्तो छ यसलाई यसरि परिवर्तन गरियो भने नयाँ बन्छ भनेर बनाउँन र निर्मातालाई पनि यसरि बनाँए भन्दा पनि यस्तो बनाएँ भनिन्छ र गीत सुनाइन्छ ।
थोरै व्यक्तिहरुबीचमा सुनिएको गीत पछि मासमा आउँदा प्रभावित भएको थाहा हुने उनी बताउँछन् । शब्दहरु प्रभावित भएर नै आउने र छोटो समयमा सिर्जना गर्न सर्जक माथि दवाव दिइन्छ र अरुको सिर्जनामा परिवर्तन गर्न भन्दा पनि हुवहु कपि भएको हुन सक्ने उनी थप्छन् । चोरी वा नक्कल गर्ने प्रवृति फिल्मका गीत संगीतमा मात्र नभएर अन्य गीत संगीतमा रहेको उनी बताउँछन् ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ को उपधारा १ मा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रावधान छ । सम्पत्तिअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्ति पनि पर्ने उल्लेख छ  ।
प्रतिलिपि कानुनी व्यवस्था
प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र प्रतिलिपि अधिकार नियमावली २०६१ मा भने साहित्य, कला, ज्ञान–विज्ञान र मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुत गरिएका रचनामा रचयिताको हक लाग्ने जनाइएको छ । यसको अर्थ रचयिताको अनुमतिबिना उसको सम्पत्ति चलाउन पाइँदैन ।
नेपाल प्रतिलिपि ऐन २०५९ को दफा २७ मा प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन भएको भेटीएमा १० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना साथै ६ महिना जेल वा दुवै हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस्तैै, दोस्रो पटक प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघन भएमा २० हजार देखि दुई लाख जरिवाना अनी एक वर्षसम्म जेल वा दुवै सजायको व्यवस्था हुन सक्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
स्रष्टाको सिर्जना बौद्धिक सम्पत्ति हो । कानुनी रुपमा व्यवस्था भएतापनि यसको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भने कम भएको पाइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : पुष्पको लागि ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्ला मारुनी ?
फिल्मी फण्डा । फिल्म खेल्न थालेको चार वर्ष बित्दा पनि नायक पुष्प खड्काको करिअरले लोभलाग्दो गति पक्रेको छैन । उनको डेब्यु फिल्म अझै पनि कतिखेर लाग्यो कतिखेर हलबाट उत्र्यो पत्तै भएन । फिल्ममा उनको सहायक भूमिका रहेको थियो ।
त्यस्तै अर्को फिल्म दर्पणछायाँ २ मा उनको मुख्य भूमिका थियो, तर न फिल्मले दाम कमायो, न त उनको नाम नै वजनदार बनायो । उनले अर्को फिल्म मंगलमबाट हल्का राहत महसुस गरे । मंगलम पुष्पको लागि मंगल नै रह्यो । अर्को फिल्म दाल भात तरकारीले पनि उनको करियरमा पोषण भर्न सकेन । उनी हास्य कलाकारको भीडमा हराए भने वेस्वादको दाल भात तरकारीलाई दर्शल पचाउन सकेनन् ।
अब बिग बजेटको फिल्म मारुनी उनको करिअरको ‘टर्निङ पोइन्ट’ का रुपमा हेरिएको छ । फिल्मको लागि नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मी शाह महँगो पारिश्रमिकमा अनुबन्धित भएकी खबर आएको थियो । पुष्प पनि ३० लाख पारिश्रमिक डिमाण्ड गर्न थालेका छन् । फिल्मका सोलो हिरो पुष्प फिल्मलाई लिएर निकै आशावादी छन् । उनको लागि आसा गरिए झैँ ‘टर्निङ पोइन्ट’ बन्ला त मारुनी ? त्यो भने फिल्म प्रदर्शन पश्चात् नै थाहा हुनेछ, प्रतिक्षा गरौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : दुई महिना पर्खदा पनि मिलेन हमालको समय
फिल्मी फण्डा । महानायक राजेश हमालाई रजतपटमा कहिले फर्कने भन्ने प्रश्न बारम्बार सोधिने प्रश्न हो । उनले पनि फिल्म छिट्टै खेल्ने र निर्देशनमा समेत आउन सक्ने बताउँदै आएका छन् । कलाकार फाइनल गर्दै गरेको फिल्म प्रेमगीत ३ मा हमालले अभिनय गर्ने लगभग पक्का जस्तै भएको थियो । उनले फिल्ममा अभिनेता प्रदिप खड्काको बाबुको भूमिकामा काम गर्ने खबर बाहिरिएको थियो । हमालसँग विगत केही महिनादेखि निर्माता सन्तोष सेन छलफलमा थिए ।
तर, हमालले अन्तिम समयमा आएर फिल्ममा काम नगर्ने बताएको फिल्म युनिटले जानकारी दिएको छ । राजेश हमालले पहिले फिल्ममा काम गर्ने इच्छा देखाएका थिए पक्का त भएको थिएन, तर आइतवार फिल्म युनिटले अन्तिम छलफल गर्दा समय मिलाउन नसकेको भन्दै फिल्म नखेल्ने बताएका फिल्म युनिटले फिल्मी फण्डालाई जानकारी दिएको छ । तीन पटकसम्म छलफल गर्दा हमाल सकरात्मक रहेको र फिल्म युनिटले पनि दुई महिना पर्खेको र अन्तिम समयमा हमाल व्यस्त रहँने हुँदा फिल्म खेल्न असमर्थ भएका हुन् ।
फिल्मका लागि नयाँ कलाकारको तय भैसकेको र छिट्टै नै सार्वजनिक गर्ने निर्माण टिमले जनाएको छ । फिल्म क्षेत्रमा नदेखिए पनि हमाल पछिल्लो समय व्यस्त नै छन् । हालै ‘को बन्छ करोडपति’ मा देखिएका हमालले फिल्ममा भने अभिनय गरिरहेका छैनन् । ‘को बन्छ करोडपति’को अर्को सिजन अन्य समस्या नआएमा तीन महिना भित्रमा आउने ‘को बन्छ करोडपति’ निर्माण टिमले बताइसकेको छ । अब ‘को बन्छ करोडपति’को सिजन २ मा हमाल देखिन सक्नेछन् ।
उता नायिकाहरुको अडिशन बाट शीर्ष तीन सम्म पुगिसकिएको निर्देशक छेतेन गुरुङ्गले जानकारी दिएका छन् । फिल्म ‘प्रेम गीत ३’ मा प्रदीप खड्का र मनिष राउतको शीर्ष भूमिका रहनेछ । छायांकनमा जानुपूर्व नै यो फिल्म नयाँ वर्षको अवसर पारेर आगामी चैत्र २८ मा रिलिज हुने घोषणा गरिसकिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : के कारणले रुचाइयो ‘जात्रै जात्रा’ ?
फिल्मी फण्डा । नेपाली फिल्मले दर्शकको साथ पाउन छोडेको धेरै भइसकेको छ । गतिलो फिल्म नबनेर नै दर्शक हलसम्म आकर्षित हुन सकिरहेका छैनन् । प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाउने फिल्महरुको संख्यामा कमि आएको छ । एकाध फिल्महरुले मात्र प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाउन सफल भएका छन् । जेठ ३ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘जात्रै जात्रा’ ले भने हलमा सम्झनायोग्य व्यापार गरिरहेको छ । फिल्मले दर्शक र समीक्षकबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ । फिल्म मल्टिप्लेक्समा पाँचौ हप्तामा लागिरहेको छ । फिल्मले प्रदर्शनको ५१ औँ दिन मनाउने आंकलन गरिएको छ ।
के कारणले फिल्म रुचाइयो ? यसबारे चर्चा गरौँः
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा बन्ने सिक्वेललाई ब्याज खान मात्र बनाइएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, यसबाट ‘जात्रै जात्रा’ मुक्त रह्यो । ‘जात्रा’ को सिक्वेल ‘जात्रै जात्रा’ भने सिक्वेलको हिसाबले उत्तिकै शक्तिशाली रह्यो । फिल्म‘जात्रा’ मा जसरी कथा टुङ्गिएको छ, त्यहीँबाट दर्शकको कथा चित्त बुझने गरी नयाँ कथा सुरुवात हुन्छ ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा कमजोर स्क्रिप्टका कारणले फिल्म कमजोर बनेको फिल्मकर्मीहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘जात्रै जात्रा’ले कथामा दर्शकलाई बाँधेर राख्न सफल भएको छ । प्रदीप भट्टराईले १७ पटकसम्म स्क्रिप्ट पुन:लेखन गरिएको बताउँछन्, त्यसको प्रभाव फिल्ममा परेको छ ।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा निर्देशकीय पक्षमा सँधै औँला सोझिने गर्छ । सामान्यतया फिल्मको क्याप्टेनशीपमा निर्देशक चुकिरहेको भनेर आलोचना हुने गर्दछ । तर, ‘जात्रै जात्रा’मा निर्देशकीय पक्ष अब्बल छ । निर्देशक प्रदीप भट्टराईले स–साना कुरामा पनि ख्याल गरेका छन् । उनको क्याप्टेनशीप र मिहेनत फिल्ममा झल्केको छ ।
फिल्मको कथालाई प्रदर्शन गर्ने अभिनयले हो । फिल्ममा विपिन कार्की, रविन्द्र झा र रविन्द्र सिंह बानियाँ लगायतका कलाकारको मूख्य भूमिका छ । पात्रका आफ्ना समस्या छ, ती समस्याकै बीच पात्रले अनेक हाउभाउ गर्छन् । कथाले भन्न खोजेको कुरा प्रस्तुत गर्दछन् । रंगमञ्चबाट उदाएका कलाकारहरुको दमदार अभिनयले फिल्मलाई शसक्त बनाएको छ ।
फिल्मका गीत/संगीत श्रुतिमधुर छ । वास्तविक जीवनसँग मेल खाने शब्द पात्रको जविन्त अभिनयले हेर्न लायक बनाएको छ । ‘शास्त्रमा लेख्नलाई छुट्या मात्र हो, जीवन जात्रा हो ।’ जस्ता वाीतविक जीवनमा मेल खाने शब्दहरुले फिल्मलाई बलियो बनाएको छ । फिल्म युनिट प्रदर्शनको ५१ दिन पार गर्नेमा विश्वस्त छ । फिल्ममा दयाहाङ राई, बर्षा राउत, राजाराम पौडेल लगायतको पनि अभिनय छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : डेब्यु एक्टरको जिम्मेवारी साम्राज्ञी माथी ?
फिल्मी फण्डा । अहिले रजतपटका हिरोइनमा कसैको स्टारडम छ भने त्यो साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहकै छ । उनको स्टारडमलाई उपयोग गर्न निर्माताले उनलाई १६ लाखको बोली लगाउछन् । ‘ड्रिम्स’बाट रजतपटमा उदाएकी साम्राज्ञीको दोस्रो फिल्म थियो, ‘ए मेरो हजुर २’ । उक्त फिल्म झरना थापाको निर्देशनमा डेब्यू थियो । निर्मातालाई साम्राज्ञी चाहिएको थियो । उनको तेस्रो फिल्म थियो ‘तिमीसँग’, जहाँ शिशिर राणाले निर्देशनमा पाइला चाल्दै थिए । उनले डेब्युलाई सम्झन लायक बनाउन साम्राज्ञीलाई फिल्ममा लिएका थिए ।
साम्राज्ञीको अभिनय यात्रामा चौँथो फिल्म थियो ‘कायरा’, जहाँ चक्लेटी नायक आर्यन सिग्देल पनि थिए । त्यतिवेला आर्यन खस्केको क्रेजलाई फर्काउने ध्याउन्नमा थिए । साम्राज्ञीको पाँचौ फिल्म थियो ‘इन्टु मिन्टु लन्डनमा’, जहाँ कोरियोग्राफर रेनशा बान्तावा राईले निर्देशनमा पाइला चाल्दै थिइन् । त्यस्तै धिरज मगर पनि रजतपटको लागि नौलो थिए ।
साम्राज्ञीको छैटौँ फिल्म ‘रातो टीका निधारमा’मा छायाकंनमा छ । यस फिल्मबाट निर्माता तथा निर्देशक अशोक शर्माका छोरा अंकित शर्माले डेब्यू गर्दैछन् । कुनै न कुनै रुपमा साम्राज्ञीले हरेक फिल्ममा नयाँ जिम्मेवारी पाएकी छिन् । अभिनय मात्र नभएर अरुको लागि पहिचान स्थापित गर्नको लागि पनि उनको जिम्मेवारी रहन्छ ।
पहिलो फिल्मबाट नै उनी लाइमलाइटमा आएकी थिइन् । उनलाई आफु सुरक्षित बन्न निर्माताले लगानी गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो लागि मात्रै आफुसँग जोडिएका को स्टारहरुलाई सफल अवतरण गराउनु पर्ने जिम्मेवारी लिदैं आएकी छिन् । पहिलो फिल्म ड्रिम्समा भने उनलाई अनमोल केसीले सफल अवतरण गरिदिए । उनको कामले पनि निकै प्रशंसा पायो । त्यसयता उनले सलिनमान बँनिया, आकाश श्रेष्ठ, धिरज राई हुँदै अब अंकित शर्माको सफल अवतरणका लागि मिहेनत गर्दैछिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘भारत’को लागि दिएको स्टे अर्डर खारेज, अब फिल्म शुक्रवार मात्रै रिलिज
फिल्मी फण्डा । ब्याङ्कटेस ईन्टरटेन्मेन्टले फिल्म भारत रिलिज गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दर्ता गरेको थियो । त्यसमाथी कार्वाही गर्दै जिल्ला अदालतले चलचित्र विकास बोर्डलाई विपक्ष बनाउँदै फिल्म भारत सेन्सर प्रक्रियाका लागि नरोक्न स्टे अर्डर दिईएको थियो ।
भारत बुधवारनै नेपालभर रिलिज भयो । तर, यसको ब्याख्या गलत रुपमा विकास बोर्ड माथी परेको थियो । चलचित्र विकास बोर्डले नेपाली फिल्मको प्रवर्धनको लागि सबै फिल्म शुक्रवार नै रिलिज गर्ने तयारी गरिरहँदा अदालत बाटनै स्टे अर्डर आएपछि फिल्म बुधवार रिलिज भएको बोर्ड अध्यक्ष केशव भट्टराईले बताउँदै आएका छन् ।
फिल्म रिलिज हुँदै गर्दा चलचित्र विकास बोर्डले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई स्पष्टिकरण पठाईएको थियो । चलचित्र विकास बोर्डले दिएको स्पष्टिकरणको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उक्त स्टे अर्डर खारेज गरिदिएको छ । भारत रिलिज गर्न स्टे अर्डर दिएको अदालतले उक्त निर्णय खारेज गरेसँगै सोही प्रकृतीका मुद्धाहरु अब अदालतमा नजाने बोर्डले जनाएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : नयाँ प्रतिभा जन्माउने श्रृंखला ‘नाई नभन्नू ल’
फिल्मी फण्डा । रजतपटको लामो शृंखलाको फिल्म हो ‘नाई नभन्नू ल’ । यसको पाँचौ भाग आइसकेको छ र ती सबै चलेका पनि छन् । पाँचौं भागसम्म आइपुग्दा यसले हरेक साल कोही न कोही कलाकार जन्माउँदै आएको छ । शृंखलाको धेरै जसो फिल्मको नेतृत्व निर्देशक विकास राज आचार्यले गरेकाले यसका शृंखलाले रजतपटका कोही न कोही स्टार जन्माएको छ । विकास राज आचार्यले ‘नसिब आफ्नो’ बाट निर्देशनमा डेब्यु गरे । त्यसयता उनले ‘रिदम’ र ‘म तिम्रो भइसकें’ पनि निर्देशन गरे तर पनि उनी ‘नाई नभन्नू ल’ बाट नै लाइमलाइटमा आएका हुन् । ‘नाई नभन्नू ल’को तेश्रो सिक्वेनसमा भने मुस्कान ढकाल पनि थिए ।
आचार्य कलाकारलाई डेब्यु दिनेमा अग्रपंक्तिमा पर्छन् । संयोग नै मान्नुपर्छ, रजतपटमा पछिल्लो समयमा रुचाइएका बालकलाकार, नायक–नायिका, गायक हिट सिक्वेल ‘नाई नभन्नू ल’ कै उत्पादन हुन् । ‘नाई नभन्नू ल’ बाट कसै न कसैले मौका पाउँदै आएका छन् । ‘नाई नभन्नू ल’ बाट नायिका ऋचा सिंह ठकुरीले रजतपटमा पर्दापण गरिन् । फिल्मबाट ऋचाले पाएको चर्चा लोभलाग्दो थियो । पछि ‘म तिम्रो भइसकें’ पछि ऋचा आचार्य क्याम्पमा दोहोरिन् । आचार्य क्याम्पबाट बाहिर ऋचाले सफलता प्राप्त गर्न सकिनन् ।
‘नाई नभन्नू ल २’ले धेरै कलाकारलाई डेब्यु गरायो । यसबाट अहिले चल्तीकी नायिका वर्षा सिवाकोटीले डेब्यु गरेकी थिइन् । त्यस्तै बालकलाकारका रूपमा सुज्ञानी भट्टराईले पनि अभिनय कौशल पस्केकी थिइन् । यही फिल्मबाट प्रेम परियारले पाश्र्व गायनमा डेब्यु गरे । उनले गाएको ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन’ र ‘यी आँखामा तिमी छौं’ रुचाइयो । ‘रिदम’ बाट डेब्यु गरे पनि अनुभव रेग्मी यही फिल्मबाट बालकलाकारका रूपमा लाइमलाइटमा आए ।
‘नाई नभन्नू ल ३’मा भने परिचित अनुहारकै वर्चस्व रह्यो । ‘नाई नभन्नू ल ४’ बाट डेब्यु गरेका वर्षा राउत, पल शाह र आँचल शर्मा फिल्म अभिनयमा चल्तिका कलाकारका रुपमा स्थापित भए । म्युजिक भिडियोको मोडलिङमा हटकेक मानिएका पलले यो फिल्मबाट चर्चा पनि राम्रै पाए । यही फिल्ममार्फत नायिका आँचल शर्मासँग चिनजान गरेका पल र आँचलको जोडी अहिले प्रेमिल जोडीका रुपमा फिल्मी वृतमा चर्चामा आइरहन्छन् । वर्षा राउत धेरैको रोजाइकी नायिका हुन् ।
पाँचौं शृंखलामा पनि फिल्मले नयाँ अनुहारलाई मौका दियो । यही फिल्ममा अनुभवको जोडीका रूपमा भित्रिएकी सेड्रिना शर्माले बाल कलाकारमा स्टारडमको बाटो पक्रिसकेकी छिन् । यही फिल्मबाट अभिषेक नेपालले स्वस्तिमा खड्काको जोडी भएर डेब्यु गरे । गायिकाका रूपमा समीक्षा अधिकारीले मौका पाइन् । उनको आवाजमा रहेको ‘बालापनको उमेर’ वोलको गीत रुचाइएको छ ।
शृंखलाको दौडमा अग्रपंतिमा रहेको ‘नाई नभन्नू ल’ले क्षमतावान र प्रतिभावान कलाकारहरुको लागि मार्ग खोलिदिएको छ । यसै शृंखलाबाट टेलिभिजन प्रस्तोता सुरज सिहं ठकुरी पनि फिल्मी नगरमा चिनिएका छन् । प्रेमलाई केन्द्रमा राखेर कथा निर्माण गरिएको शृंखलाको अर्काे भाग आउँछ या आउँदैन, यदि आयो भने कुन जनरामा फिल्म बन्ला त्यो भने प्रतिक्षा गरौँ ।